Shir laga yeeshay Amniga degmada Guriceel | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Shir laga yeeshay Amniga degmada Guriceel
Shirkan oo ah mid Todobaadle ah ayaa waxaa ka qeyb galay Talisyada Booliska iyo Nabadsugidda Guriceel, Saraakiisha ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad, Ciidamada Qeybta 21,aad gaar ahaan Guutada 15,aad, taliska Gorgor iyo kuwa Daraawiishta Galmudug.
Shirka ayaa waxaa looga hadlay sidii loo xaqijin lahaa Amniga Degmada Guriceel loogana hortagi lahaa cid walba oo lidi ku ah Amniga Magaalada.
Taliyaha Booliska Degmada Guriceel Cismaan Cali hudey oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay is garab taagan yihiin Taliyaasha Ciidamada Qeybahooda kala duwan waxaana uu si gaara ugu nuux nuux saday in ay Sarakiishu is la qateen in laga Horataggo wax walba oo wax u dhimaya xasiloonida degaanka.
Degmada Gurceel ee Gobola Galaduud ayaa waxaa ay kamid tahay meelaha ugu Amniga wanaagsan degaannada Gamudug, balse waxaa horay ugu dagaaamay Ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug oo dhinac ah iy xoogaga Ahlusunna.
Shir laga yeeshay Amniga degmada Guriceel was last modified: February 25th, 2022 by warsan radio
Soomaali ku xirneyd dalka Ukraine oo la siidaayay
Meydadka 20 dhalinyaro ah oo hal meel laga helay